“Takalo haingo”: hetsika manandratra ny vita malagasy | NewsMada
“Takalo haingo”: hetsika manandratra ny vita malagasy
Manan-talenta ny Malagasy! Saika ahitana izany avokoa ny karazan-javakanto maro. Anisan’izany ny tontolon’ny akanjo. Ho an’ny hetsika “Takalo haingo”, misongadina tanteraka ny asa famoronana… Tazana avy amin’izany ilay fananana talenta.
Na eo aza ny fiandrasana fatratra ny voka-pifidianana sy ny resabe manodidina izany, heverina fa mampitongilan-tsofina ny maro, hotanterahina rahampitso sy ny asabotsy izao ny andiany faha-11 amin’ny “Takalo haingo”. Toerana roa ny handray ireo hetsika samihafa: ny eny amin’ny ADMC-Craam eny Ankatso sy eny amin’ny Tahala Rarihasina.
Manosika hatrany ny famoronana malagasy, eo amin’ny tontolon’ny haingo sy fitafy, ity hetsika karakarain’ny Maromaitso ity. Tanjona ny hitafiana ny vita malagasy, ny hananany toerana eo amin’ny fahazaran’ny Malagasy, raha hiakanjo. Amin’ity andiany faha-11 ity, hisy ilay atao hoe “Akanjo vidim-pidirana”, izany hoe, fividianana akanjo noforonina sy vitan’ny Malagasy.
Ao amin’ny Maromaitso no ahitana izany, mandritra ny herinandron’ny 24 desambra. Tsy mifidy sokajin’olona na taona na bika aman’endrika ny tontolon’ny lamaody sy ny filatroana. Anisan’ny mampiavaka ny fomba fijerin’ny mpikarakara ny “Takalo haingo” izany. Sehatra iray io hanomezana sehatra ireo Malagasy manan-talenta amin’ny famoronana. Tsy diso anjara koa anefa ireo mpilatro, tsy voafetran’ny hatsàram-bika, ary homena fahafaham-po tanteraka ny mpanjifa, ny Malagasy.